ဖိလစ်ဘလက်ဝုဒ် နယူးဇီလန် ပြန်ပြီ
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို နားကြပ်တပ်ထားသောပုံကြောင့် ထောင်ကျခဲ့နေရာမှ သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခြင်းဖြစ်သည်
ရှောင် ဂလေစင် နှင့် အိုလီဗာ ဆလိုး ရေးသားသည်။
လွှတ်တော်ဦးဆောင်ကော်မတီတွင် ဦးဝင်းမြင့်နှင့် ဦးမန်းဝင်းခိုင်သန်းတို့ ပါဝင်
လွှတ်တော်အသီးသီး၏ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က လွှတ်တော်ရေးရာ ဦးဆောင်ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်း
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဖျက်သိမ်းရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက် တောင်းခံ
သီးခြားဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် မထားတော့ဘဲ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင် ဌာနတစ်ခုအဖြစ် ထားရှိရန် သမ္မတက သက်တမ်းသုံးရက်သာ ကျန်တော့သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ကို တောင်းခံခဲ့သည်
ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်းကို Myanmar Mobile Money Services က ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကို ရှင်းလင်းပေးမည်
ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ယာဉ်မရပ်ရ ဆိုင်းဘုတ်များချကာ လမ်းကို ပိတ်ဆို့ထား
ယခုနှစ် ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အလားအလာ.. ပြန်လည် ဦးမော့လာနိုင်
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အကျိုးဆက်များကြောင့် အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက် အားနည်းခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် အစိုးရသစ် ပြောင်းလဲပြီးနောက်မှာ ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာနိုင်တယ်လို့ ဈေးကွက်က မျှော်လင့်လျက်ရှိနေပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ဟာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်မှာ ဈေးနှုန်း အဆမတန် မြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ၁၀ စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ငြိမ်သက်နေခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေ.
ဧပြီ ၁ ရက်နောက်ပိုင်း နိုင်ငံခြားအရက်နှင့် ဆေးလိပ်များ ဈေးနှစ်ဆ တက်လာနိုင်
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၃ ဇန်နဝါရီ ၂၂ တွင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ အထူးကုန်စည်များတွင် ပါဝင်သည့် နိုင်ငံခြား စီးကရက်များသည် ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုး၏ ၁၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် နိုင်ငံခြား အရက်များသည် ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုး၏ ၁၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊.
Brennan O’ Connor ရေးသားသည်။
ရပ်ဝေးမှာ မြန်မာ့အငွေ့အသက်တွေကို ဆက်လက်ရှင်သန်နေစေတဲ့ ဝါရှင်တန်မြို့နားက သပြေညိုကျောင်းကလေး
ရန်ကုန်မြို့က သုသာန်တွေဟာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးရဲ့ အမိန့်ကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်ကစပြီး နေရာပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနေရာတွေကိုတော့ အကြီးစား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အစားထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ မြတ်ကျော်သူ ရေးသားသည်။ ဓာတ်ပုံများ – အန်းဝမ် ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေက အရင်သချုႋင်းမြေနေရာတွေပေါ်မှာ အထပ်မြင့်တိုက်တွေ ဆောက်လာကြပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ –.